Izophenduka isibhedlela iRoyal Show grounds – Sivubela intuthuko Newspaper
Izophenduka isibhedlela iRoyal Show grounds
UNdunankulu wakwaZulu Natal uMnuz Sihle Zikalala kanye no Nksz Nomagugu Simelane -Zulu
EMIZAMWENI yesiFundazwe yokubhekana ngqo nesibalo esikhula mawala sabahaqwa yigciwane iCorona, uNdunankulu wesiFundazwe saKwaZulu Natal, uMnu Sihle Zikalala usedlulisele ngokusemthethweni enye yezinkundla enedumela ukuba nayo isetshenziselwe ukugcina abahaqwe yileli gciwane.
Le nkundla yiRoyal Show Ground yaseMgungundlovu eyaziwa kakhulu njengoba ivamise ukusingatha imibungazo emikhulu okubalwa kuyona iNkulumo yesiFundazwe, ukuvulwa kweSishayamethetho kanye nemicimbi yokwethweswa kwemiyezane.
Ekhuluma esithangameni sabezindaba ebiseMgungundlovu uZikalala uthe unethemba elikhulu lokuthi lemi zamo izothela izithelo ezinhle. Ukuvezile ukuthi le nkundla izomumatha imibhede engu-254. Futhi ukugcizelelile ukuthi izobe isetshenziselwa kakhulu ukusiza iziguli ezivela kwiziFunda, uMgungundlovu, iHarry Gwala kanye noThukela.
Ezinyangeni ezimbalwa uthe kuyajabulisa ukuthi sebekwazile ukwengeza ngemibhede engu-7111. Yize isiFundazwe sibhekene nesimo esibucayi kakhulu kodwa uthe sebekwazile ukuqasha izisebenzi eMnyangweni weZempilo ezilinganiselwa ku-8893. Phakathi kwazo uveze ukuthi baqashe abahlengikazi abangu-4804 kanye nomaBhalene abangu-284.
UNdunankulu uphinde wakhala ngabadicilela phansi umsebenzi omkhulu asebewenzile. “Sesisebenze umsebenzi omkhulu wokuletha izinsiza ezibhedlela. Ingwadla enkulu esibhekene nayo ukufinyelelisa izinsiza ezikoleni ngoba ongoma uyayona esisebenzisana nabo kubuye futhi kube yibona abahudula izinyawo abafaka unyawo lwedada kulokhu. Sesihlele nokuthi uma sibabhadama izinyawo zozogcwala udaka,” usho kanje.
KUBUNGAZWE USUKU LWABAPHILA NEBALA ELIMHLOPHE
Iminyango ibhunga yokwandisa izimoto zabafundi